Fihotsahana teny Avaradoha :: Trano telo potika nianjeran’ny bararata • AoRaha
Tsy nampoizin’ireto fianakaviana ny fianjeran’ny bara­rata lehibe niaraka tamin’ny fakany tamin’ny tranon’izy ireo, omaly maraina. Tokony ho tamin’ny dimy maraina, no niongotra ilay fakan-kazo.
Tafon-trano telo teo ambaniny no nifatrarany. Anisan’ireo voa mafy tamin’ izao loza ny fianakavian-dRasoanaivo Alisoa Ambinina sy ny vady aman-janany. Tsy tafavoaka tao izy ireo raha tsy noesorina ny ampahany tamin’ilay bararata.
“Mbola natory izahay no nandre feo nidoboka mafy be. Nitsoaka haingana, nony avy eo, satria teo amin’ny tafo avy hatrany no nianjerany. Saika tavela tao ny zanako lahy, 22 taona, raha tsy niala haingana tamin’ny fandriana natoriany”, hoy ity renim-pianakaviana teo am-pitantarana ny zava-niseho, omaly hariva.
Nambarany fa tsy nanam-po ny hianjeran’ireo hazo ireo mihitsy izy mianakavy sy ny mpiara- monina taminy, hatramin’izay, satria nihevitra an’izany ho fefy aza izy ireo.
Olona roa ambin’ny folo no indray tra-boina noho io voina niseho, omaly, io. Mavesatra ho azy ireo ny fahavoazana, na tsy nisy aina nafoy aza, satria tsy azo nidirana ny trano hatramin’ny omaly hariva. “Mbola tsy fantatray mihitsy ny fitamba­ran’ny entanay simba satria mbola tsy niditra tao izahay. Tsy afaka hianatra aloha ny zanakay”, hoy indray Raso­anaivo Alisoa Ambinina.
Nambaran’ireo mponina teny an-toerana fa efa ny tola­kandro vao tonga ny mpamonjy voina nanampy tamin’ny fanesorana ny hazo nitambesatra tamin’ny tafo. “Tsy maintsy hapetraka amin’ny tranolay aloha ireo tra-boina. Efa nisy kosa ny fanampiana avy amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra, toy ny kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro ha­nampiana azy ireo”, hoy ny tompon’andraikitra iray avy ao amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra.
Tonga teny an-toerana nijery ny zava-misy sy nitondra ny fanampiana rahateo ny Ben’ny tanànan’Antanana­rivo, Andriantsitohaina Naina.
Mangataka ny fanesorana an’ireo bararata mbola maniry, izay loza mandindona eny an-toerana ny mpiara-monina amin’ireo niharam-boina.